Fepetra sy fepetra -
Serivisy Antso an'i Amazon
Antso fampiatoana Amazon
Fisorohana ny fampiatoana ny fivarotana Amazon
Fanaraha-maso ny fahasalamana amin'ny kaonty
Fisondrotan'ny varotra ny mpivarotra Amazon
Ireo fehezan-dalàna momba ny serivisy ireo dia mitaky ny zonao sy ny adidy eo aminao sy ny APlus Global Ecommerce.
Vakio tsara ny fifanarahana alohan'ny fanekenao handoa ny sarany amin'ny serivisinay. Raha tsy azonao ny ampahany na manana fanontaniana dia aza misalasala mangataka fanampiana aminao. Manoro hevitra anao izahay mba haka fotoana betsaka araka izay ilaina mba hahatakarana ny serivisy natolotray.
"fifanarahana”: Fifanarahana eo aminao sy aminay io.
"Service”: Io no karazana serivisy nofidinao.
"ianao”: Ilay mpanjifa na ilay nividy ny serivisinay.
"Us","ny","We”: APlus Global Ecommerce
2.1. Nanendry an'i Etazonia tamin'ny serivisy nifanarahana ianao ary nifanaraka izahay hanome ny serivisy natokana ho an'ny fepetra sy fepetra.
2.2. Raha vantany vao mividy ny serivisy ianao dia manomboka ny fifanarahana eo aminay.
3.1. Izahay dia hanome ny serivisinay mifototra amin'ny fampahalalana nomenao, sy ny fifandraisana eo amin'ny kaonty mpivarotra anao sy Amazon
3.2. Ny fandoavanao ny serivisy dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny antoka.
4.1. Handray an-tanana ny olana haingana araka izay azo atao izahay, mifototra amin'ny fampahalalana nomenao.
4.2. Manome torolàlana hiatrehana an'i Amazon izahay. Anjaranao ny manaraka azy ireo araka izay tratra.
4.3. Homena anao ny serivisinay mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasanay.
Izay tsy ataontsika
5.1. Tsy manome karazana torohevitra ara-dalàna izahay.
5.2. Tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika ara-dalàna atao aminao izahay raha misy hetsika hosoka.
5.3. Izahay dia tsy mangataka antoka fa hisy fampiatoana amin'ny ho avy vantany vao tapitra ny fotoananay.
Izay tokony hataonao
6.1. Miantehitra amin'ny fampahalalana omenao izahay. Tsy maintsy manome ny fampahalalana rehetra sy ny antontan-taratasy tany am-boalohany (raha angatahina) tsara indrindra amin'ny fahalalanao. Ny olana rehetra mipoitra ankoatry ny fampahalalana omena dia tsy tompon'andraikitra aminay.
6.2. Tokony ho azonao antoka fa mitazona fifandraisana mety aminay ianao mandritra ny vanim-potoanan'ny serivisy mba hahomby kokoa. Afaka mifandray aminao izahay amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona, fax na taratasy. Azafady, alao antoka fa tsy hanao tsinontsinona anay izahay na mety hitarika amin'ny serivisy tsy mahomby izay tsy tompon'andraikitra amin'ny fanatonana hatrany.
6.3. Adidinao ny fanajana ny politika sy ny lalàna any Amazon.
Ahoana ny famaranana ny fifanarahana
7.1. Azonao atao foana ny manafoana ny fifanarahana nataonao taminay. Aminay ka ny hany mila ataonao dia mandefa mailaka aminay info@aplusglobalecommerce.com mikasika ny fanafoanana
Ahoana no ahafahantsika mamarana ny fifanarahana
8.1. Ny fifanarahana dia azo esorina amin'ny sisintsika alohan'ny 14 andro fampandrenesana. Ireto ambany ireto ny tranga manaraka izay ahafahanay mamarana ity fifanarahana ity.
8.2. Nandika ny fepetra sy fepetra ianao.
8.3. Ny fampahalalana omenao dia diso na diso.
8.4. Tsy nisy ny fifanoratana teo anilanao nandritra ny 6 volana (iray manontolo).
9.1. Ity fifanarahana ity aminao dia tantanan'ny lalàn'i India. Izay fifanolanana rehetra amin'ny fifanarahana dia hataon'ny fitsarana any India.
Fiatrehana ny fitarainana
Izahay dia mikasa ny hanome ny serivisinay amin'ny fenitra avo indrindra. Izany no mahatonga anay manome lanja be ny hevitrao.
Zava-dehibe ny ampahafantaro anay anay fa isaky ny tsy afa-po amin'ny serivisy ianao mba hahafahanay manonitra sy manatsara izay azonay atolotra.
Hiezaka izahay hamaly haingana araka izay tratra ny fangatahana na ny olana ary horaisinay eo am-pelatananay ny raharaha mba hahitsy araka ny nifanarahana.
Ny fizotrantsika amin'ny fitarainana
Araho azafady ity fomba fanao ity mba hanampiana haingana amin'ny famahana ny olanao.
Andininy ilaina amin'ny fitoriana:
Mba hahafahana manao fitarainana dia omeo ireto fampahalalana manaraka napetraka etsy ambany ireto.
Ny anaranao sy ny adiresy mailakao
Famaritana mazava momba ny fitarainanao na ny ahiahinao
Ny antsipiriany momba ny fomba itiavanao anay manitsy ny toe-javatra
Ahoana ny fomba hanaovana fitoriana aminay?
Alefaso ny pitsopitsonao miaraka amin'ny fitoriana ao amin'ny info@aplusglobalecommerce.com
​Famerenam-bola sy fanafoanana
Ny APlus Global Ecommerce dia tsy manome famerenam-bola aorian'ny nanomezana ny serivisy. Anjaranao ny mahatakatra ny politika famerenam-bola mandritra ny fividianana.
Saingy amin'ny toe-javatra miavaka, dia mety handray fepetra ilaina isika manoloana ny karazana serivisy atolotray.
Hanaja ny famerenam-bola izahay amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Raha tsy azonao ny serivisy tadiavina amin'ny tsy fahafahanao mandefa hafatra noho ny mpamatsy mailaka anao. Amin'ity toe-javatra ity dia mamporisika anao izahay hifandray amin'i ASAP raha mila fanampiana. Ny fangatahana dia hatolotra an-tsoratra amin'ny sampana serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny fanoratana dia tokony homena ao anatin'ny 2 andro aorian'ny fametrahana baiko na hoheverina ho raisina ny serivisy.
Raha tsy azonao ny natiora fanompoana tadiavina araka ny nifanarahana. Amin'ny olana toy izany, ianao dia afaka mifandray amin'ny Departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny 2 andro aorian'ny andro nividianana. Adidinao ny manome porofo mazava manohitra ny serivisy novidinao sy ny famaritana azy. Raha toa diso na diso ny fitarainana dia tsy hampiala voly na hanomezam-boninahitra azy.
Azonao atao ny mangataka famerenam-bola raha toa ka efa nanao ny fividianana ianao, saingy alohan'ny handraisanao ny serivisy kasainao hatao. Azonao atao ny mandefa ny fangatahana miaraka amin'ny anton'ny famerenam-bola.
Izahay dia mazoto manampy sy manararaotra ny fotoana rehetra anananay hanampiana anao !!!
Chat mivantana: https://aplusglobalecommerce.com/
Phone: + 1 775-737-0087
Miandrasa 8-12 ora azafady mba hiverenan'ny ekipan'ny Serivisy ho anao aminao momba ny olana.
Fiarovana A + mpivarotra
Fisorohana ny fampiatoana
Kaonty momba ny fahasalamana
Miresaha amin'ny manam-pahaizana anay
Salama, ahoana no hanampiako anao?